Ku Dhawaad Toban Askari Yugandheys Ah Oo Lagu Dilay Sh/hoose. – Calamada.com
Ku Dhawaad Toban Askari Yugandheys Ah Oo Lagu Dilay Sh/hoose.
calamada August 9, 2018 1 min read
Dagaal Culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo askarta Kufaarta AMISOM ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobalka Shabeelada Hoose ee Konfurta dalka Somalia.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Barqo nimadii maanta ciidamada Mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen kolanyo ka tirsan cidamada Kufaarta Afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanada Numbar60 iyo Ceelwareegow oo ka wada tirsan Wilaayada Shabeelada Hoose.
Dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoo dhawaaqa rasaasta si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo ka tirsan Wilaayadaasi.
Warar la helayo ayaa sheegaya in dagaalkaasi khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada Kufaarta Afrikaanta,wallow wali si rasmi ah aan loo xaqiijin inta uu la egyahay khasaara Kufaarta lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Habeenkii xalay ayeey aheed markii ciidamada Mujaahdiiinta ay dagaal culus ku qaadee difaacyada iyo saldhiga ciidamda Kufaarta iyo kuwa Murtadiinta ay ka sameysteen ay ka sameysteen gudaha iyo duleedka degmada Qoryooley.
Dagaalka xalay ayaa sidoo kale Khasaara Nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo kuwa Murtadiinta.
Dhanka kale waxaa sii kordhaya khasaraha ciidamada Kufaarta Uganda lagu gaarsiiyay dagaal maalin ka hor ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa Kufaarta ku dhexmaray duleedka degmada Qoryooley ee Wilaayada Sh.hoose.
Inta la xaqiijiyay dagaalkaas waxey ciidamada Mujaahidiinta ku dileen 7askari oo ah kuwa Kufaarta Uganda,waxeyna weeraradan kala duwan kusoo aadayaa xilli ciidamada Mujaahdiiinta ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo Murtadiinta duulaanka Shareeco la dirirka ah kusoo qaaday Wilaayaatka dalka Somalia.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 27-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 27-11-1439 Hijri.